Napoli oo mar qura wada doonaysa mar qura malaayiin badan ku doonaysa Marko Pjaca iyo Marko Rog – Gool FM
Napoli oo mar qura wada doonaysa mar qura malaayiin badan ku doonaysa Marko Pjaca iyo Marko Rog
(Napoli) 04 Luulyo 2016 – Dinamo Zagreb ayaa xaqiijisay inay “Napoli samaysay dalab ku kacaya €35m oo euro oo ay ku doonayso Marko Pjaca iyo Marko Rog, balse waxaa jira caqabaad.”
Laacibkan caalamiga ah ee Croatia ayaa soo jiitey dareenka kooxo dhowr ah oo Serie A ah, kuwaasoo ay ku jiraan Juventus iyo Milan.
“Waa run inay Napoli doonayso Pjaca iyo Rog. Sidoo kale waa dhab inuu dalabkoodu ku kacayo €35m oo euro, lkn heshiis ma jiro waayo caqabado ayaa taagan,” ayuu yiri madaxwaynaha Dinamo Zagreb ee Mirko Barisic oo la hadlayey Sportske Novosti.
Rog waa kubad qaabeeye 21 jirsanaya dabayaaqada bishan, halka Pjaca oo wacdaro ka dhigay KQY, isla markaana dhowaantan 21 jirsadey uu yahay laacib ka dheeli kara lambarka 10-aad iyo garabyada weerarka bidix iyo midigba.
Mar baa Inter loo badiyey, shalay Juve ayaa la sheegayey inay ugu horreeyso iyadoo ay Milan ku haysatey iminkana waxaa soo baxday Napoli oo la xaqiijiyey inay laba dalab u dirtay Dynamo.
Muxamed Faarax oo ka qaybgelaya tartankii ugu dambeeyay kahor ciyaaraha Olombikada Rio + Sawirro